Waxyaabaha uu rumeysan yahay Jeremy Corbyn - BBC News Somali
Waxyaabaha uu rumeysan yahay Jeremy Corbyn
14 Sebtembar 2015
Waxyaabaha uu rumeysan yahay Hogaamiyaha cusub ee xisbiga Labour-ka, Jeremy Corbyn, waxaa ka mid ah:
Image caption Jeremy Corbyn ayaa rumeysan in cunaqabateyn dhanka hubka lagu soo rogo Israa'iil
1: Canshuur dheeri ah: In canshuur dheeraad ah la saaro dadka maalqabaneenka ah, isla markaana sharciga lala tiigsado kuwa caanshuurta la dhuunta.
2: Wadahadalka Xisbullah iyo Xamaas: In lala hadlo ururada hubeysan si nabad looga dhaliyo Bariga Dhexe. Corbyn ayaa dhaleeceyn xooggan la kulmay markii uu kalmada “saaxiibadeen” u adeegsaday ururada Xamaas iyo Xisbullah. Waxa uu arrintaasi uga jawaabay in loo baahan yahay in lala hadlo dadka uu khilaafka idinka dhexeeyo.
3: Duqeynta ururka Khilaafada Islaamka: In xisbiga Labour-ka aanu taageerin duqeynta ka dhanka ururka isku magacaabay Khilaafada Islaamka ee Suuriya. Corbyn, oo gudoomiye u ah isbahaysiga Jooji dagaalka ayaa rumeysan in duqeynta ay waxyeeleyneyso shacabka Suuriya. Waxa uu ku talinayaa in la jaro ilaha dhaqaalaha iyo hubka ee ururkaasi.
Image caption Jeremy Corbyn waxaa uu ka qeyb qaatay dibedbaxyadii looga soo horjeeday dagaalkii Ciraaq
4. Kirada Guryaha: In dib loo soo celiyo xakameynta kirada guryaha oo lagu jaangooyo mushaaraadka maxaliga ah, isla markaana la dhiso guryo badan oo ay leeyihiin dowladaha hoose.
5. Muhaajiriinta Yurub: In la soo dhaweeyo dadka magangelyo doonka ah ee aanan heysan meel ay ku noolaadaan, waxa uuna rumeysan yahay in muhaajiriinta ay wax wanaagsan u qabteen Britain.
6. Cunaqabateynta Israa'iil: In cunaqabateyn dhanka hubka ah la saaro Israel, qaxootiga Falastiiniyiinta loo ogolaado in ay dib u laabtaan.
7. Waditaanka Bayskiilka: Corbyn ayaa taageersan waditaanka bayskiilada, mana lahan gaari u gaar ah. Chris Mason oo BBc-da ka tirsan ayuu mar ka diiday inuu la raaco gaari, asagoo sheegay in uu baaskiil ku socdo.